လူငယ်တွေအနေနဲ့ မှန်ကန်တဲ့ career လမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်ဖို့ ဘာတွေသိထားရမလဲ?
မိမိကိုယ်ကို အမှန်တကယ် ဘာလုပ်ချင်မှန်း၊ ဘယ်အရာနဲ့ ကိုက်ညီမှန်း မသိသေးတဲ့ လူငယ်တွေအတွက် အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်း ရွေးချယ်ရခြင်းဟာ အခက်တွေ့စေနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းက မသိပေမယ့် အသက်ကြီးလာတဲ့ အခါ ကိုယ် တစ်သက်လုံး လုပ်မယ် အလုပ်ကို မှန်ကန်စွာရွေးချယ်တတ်ဖို့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် လမ်းကြောင်း ရွေးချယ်ရာမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့ ကူညီပေးနိုင်မယ့် အချက်ကလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
လူငယ်အများစုဟာ အထက်တန်းကျောင်းပြီးတဲ့အခါ မိမိဘ၀အတွက် တစ်သက်တာ လျှောက်လှမ်းရမယ့် အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းကို ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ကြရပါတယ်။ သို့မှသာ ထိုရွေးချယ်မှုနဲ့ သင့်တော်တဲ့ တက္ကသိုလ်တွေ၊ သင်တန်းတွေကို တက်ရောက်ပညာသင်ကြားကြပြီး ရှေ့ဆက်ဘ၀ခရီးကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း မိမိ ၀ါသနာပါတာ၊ ဖြစ်ချင်လုပ်ချင်တဲ့အရာကို သေသေချာချာ မသိရှိသေးတဲ့အခါ ဆုံးဖြတ်ရခက်စေနိုင်သလို မိဘတွေရဲ့ တွန်းအားတွေ ပါဝင်သက်ရောက်လာတဲ့အခါ အလွန်တရာမှ ပြင်းထန်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုကို ခံစားကြရပါတယ်။ ဒါ့အတွက် လူငယ်တွေ သိထားသင့်တာတစ်ခုကတော့ အချို့သောသူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ၀ါသနာကို စောစောစီးစီး သိနှင့်ထားနိုင်ကြ ပေမယ့်လည်း အချို့ကတော့ သူတို့နဲ့ ဘယ်နယ်ပယ်က ပိုပြီးကိုက်ညီမှု ရှိသလည်းဆိုတာ သိရှိနိုင်ဖို့ အချိန်တစ်ခုပေးပြီး ရှာဖွေစောင့်ကြည့်ကြရခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖိအားတွေကို လျစ်လျှူရှုကာ စိတ်အေးအေးထားပြီး မိမိအတွက် မှန်ကန်ကိုက်ညီမယ့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ရရှိနိုင်ဖို့ အချိန်ယူ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
(၂) တတ်သိနားလည်သူတွေနဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ
နိုင်ငံရပ်ခြားတွေမှာတော့ အထက်တန်းကျောင်းတွေနဲ့ တက္ကသိုလ်တွေမှာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ရွေးချယ်ဖို့အတွက် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ ပညာရှင်တွေ ရှိပါတယ်။ လက်ရှိမှာ အဆိုပါ ၀န်ဆောင်မှုမျိုးတွေ မိမိတို့တိုင်းပြည်မှာ မရရှိနိုင်သေး တဲ့အတွက် မိမိထက်အတွေ့အကြုံရှိပြီး တတ်သိနားလည်တဲ့ လူကြီးသူမတွေ၊ အစ်ကိုအစ်မတွေနဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး အကြံဥာဏ် ရယူနိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့ ဆွေးနွေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် သင်လိုချင်နေတဲ့ အဖြေအတိအကျ မရရှိနိုင်သော်ငြား လည်း သင်ပြောပြတာတွေကို နားထောင်ပြီး သူတို့ပြန်ပြောပေးတဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေထဲက သင့်အတွက် အထောက်အကူ ပြုစေမယ့် အကြံကောင်းဥာဏ်ကောင်းတွေ ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
သင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ နယ်ပယ်အစုံက အလုပ်တွေကို လိုက်ပြီး လေ့လာကြည့်ပါ။ ဥပမာ engineering ကို စိတ်ဝင်စားပါက ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေကို သွားရောက်လေ့လာခြင်းအားဖြင့် ထိုလမ်းကြောင်းကိုသွားဖို့ သင့်အတွက် ဘာတွေ လိုအပ်မယ်၊ ဘယ်လိုအရည်အချင်းတွေ သင်ယူဖို့ လိုအပ်မယ်ဆိုတာတွေကို သိရှိနိုင်လို့ သင်လိုချင်နေတဲ့ အသက်မွေးမှု ဟုတ်မဟုတ် ပေါ်ပေါ်လွင်လွင် သိရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် သင့်ထက်ကြီးတဲ့ လက်ရှိတက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံမှာ တက်ရောက်နေတဲ့ အစ်ကိုတွေ၊ အစ်မတွေဆီကနေ ထိုတက္ကသိုလ်တွေအကြောင်းနဲ့ ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေကို မေးမြန်းနိုင်ပါသေးတယ်။
(၄) ၀ါသနာနဲ့ စိတ်ပါဝင်စားရာတွေကို စဉ်းစားပါ
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ခွန်အားဟာ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ အရာတွေနဲ့ ၀ါသနာတွေမှာ နစ်မြုပ်တည်ရှိနေတယ်ဆိုတာ သိရှိထားပါ။ သင်ဝါသနာပါပြီး ပြုလုပ်ရတာ ပျော်ရွှင်တဲ့ အရာတွေကိုလည်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ပါ တယ်။ သင်ကျောင်းမှာ သင်ယူခဲ့တဲ့ ဘာသာရပ်တွေထဲက သင်စိတ်ဝင်စားပြီး ကျွမ်းကျင်တယ်လို့ ယူဆတဲ့ ဘာသာရပ် တွေကို ချရေးပြီး ဘာလို့ကြိုက်ရသလည်း၊ ဘယ်လောက်ထိ စိတ်ဝင်စားသလည်းဆိုတာ ချရေးထားပါ။ သို့တည်းမဟုတ် လည်း သင်ဝါသနာပါတဲ့ အခြားသော အရာတွေ (ဥပမာ – ပန်းချီဆွဲတာ၊ ဓာတ်ပုံရိုက်တာ) စတာတွေကိုလည်း ချရေးပြီး ဘယ်လောက်ထိ ၀ါသနာပါသလည်းဆိုတာနဲ့ ဘယ်လောက်ထိ ထိုဝါသနာထဲမှာ နှစ်မြုပ်ထားနိုင်သလည်းဆိုတာ ရေးထားပါ။ ထိုအရာတွေထဲမှာ သင့်အနာဂတ်အတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း မပါနိုင်ဘူးဆိုတာ ဘယ်သူမှ အတပ်မပြောနိုင်ပါဘူး။
(၅) အနားကလူတွေနဲ့ အသိပေးတိုင်ပင်ပါ
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ရွေးချယ်ခြင်းဟာ လမ်းဆုံလမ်းခွတစ်ခုမှာ ရပ်နေရသလိုမျိုး စိတ်ဖိစီးမှု များလွန်းတဲ့အတွက် သင့်ရဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို သင့်အနီးအနားက မိသားစုနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောပြတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ အကြံပေးစကားတွေဟာလည်း သင့်အတွက် လမ်းကြောင်းတွေ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မိဘတွေနဲ့ တိုင်တိုင်ပင်ပင် ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် အမှားနည်းမယ့် ရွေးချယ်မှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
(၆) အခြားသူတွေပေါ် မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်မချပါနဲ့
မိဘတွေ သူငယ်ချင်းတွေစတဲ့ အနီးအနားကလူတွေကို ပြောပြတိုင်ပင်နိုင်ပေမယ့် အခြားသူတစ်ယောက်က သင့်အတွက် “ဒါ ဖြစ်သင့်တယ်။ ဒါ လုပ်ရမယ်”ဆိုတဲ့ အကြံပေးစကားတွေ၊ အမိန့်တွေပေါ် မူတည်ပြီး သင့်အနာဂတ်ကို မဆုံးဖြတ် လိုက်ပါနဲ့။ သင်လျှောက်လှမ်းရမယ့် ဘ၀လမ်းဟာ သင့်ကိုယ်ပိုင်သာဖြစ်ပြီး အခြားတစ်ယောက်က ၀င်ရောက်ဆုံးဖြတ် ရွေးချယ်ပေးလို့ မရပါဘူး။ ထိုသို့ ရွေးချယ်ပေးတာကို ပြုလုပ်ရုံနဲ့ ဘ၀ဟာ အဆင်ပြေသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မိမိ လျှောက်လှမ်းရမယ့်လမ်းကို မိမိဘာသာ ရွေးချယ်ပါ။ သို့မှသာ သင့်ဘ၀ဟာ သင့်အတွက် အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီး နေပျော်စရာ ကောင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူငယ်ချင်းက တက်ရုံနဲ့ ထိုတက္ကသိုလ်ကို လိုက်မတက်ပါနဲ့။ မိဘက ရွေးချယ်ပေးရုံနဲ့ ထိုအရာကို မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့။ အဓိက အချက်ကတော့ တိုင်ပင်ပါ။ ဆွေးနွေးပါ။ ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။ မှန်ကန်တဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနဲ့ လှပတဲ့ ဘ၀လမ်းခရီးကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ခြွေလိုက်ရပါတယ်။
လူငယျတှအေနနေဲ့ မှနျကနျတဲ့ career လမျးကွောငျးကို ရှေးခယျြဖို့ ဘာတှသေိထားရမလဲ?
မိမိကိုယျကို အမှနျတကယျ ဘာလုပျခငျြမှနျး၊ ဘယျအရာနဲ့ ကိုကျညီမှနျး မသိသေးတဲ့ လူငယျတှအေတှကျ အသကျမှေး ဝမျးကြောငျး ရှေးခယျြရခွငျးဟာ အခကျတှစေ့နေိုငျပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ငယျငယျတုနျးက မသိပမေယျ့ အသကျကွီးလာတဲ့ အခါ ကိုယျ တဈသကျလုံး လုပျမယျ အလုပျကို မှနျကနျစှာရှေးခယျြတတျဖို့ အရမျးအရေးကွီးပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အသကျမှေးဝမျးကြောငျးအတှကျ လမျးကွောငျး ရှေးခယျြရာမှာ ဆုံးဖွတျခကျြခနြိုငျဖို့ ကူညီပေးနိုငျမယျ့ အခကျြကလေးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
လူငယျအမြားစုဟာ အထကျတနျးကြောငျးပွီးတဲ့အခါ မိမိဘဝအတှကျ တဈသကျတာ လြှောကျလှမျးရမယျ့ အသကျမှေးဝမျး ကြောငျးကို ရှေးခယျြဆုံးဖွတျကွရပါတယျ။ သို့မှသာ ထိုရှေးခယျြမှုနဲ့ သငျ့တျောတဲ့ တက်ကသိုလျတှေ၊ သငျတနျးတှကေို တကျရောကျပညာသငျကွားကွပွီး ရှဆေ့ကျဘဝခရီးကို လြှောကျလှမျးနိုငျကွမှာ ဖွဈပါတယျ။ သို့ပမေယျ့လညျး မိမိ ဝါသနာပါတာ၊ ဖွဈခငျြလုပျခငျြတဲ့အရာကို သသေခြောခြာ မသိရှိသေးတဲ့အခါ ဆုံးဖွတျရခကျစနေိုငျသလို မိဘတှရေဲ့ တှနျးအားတှေ ပါဝငျသကျရောကျလာတဲ့အခါ အလှနျတရာမှ ပွငျးထနျတဲ့ စိတျဖိစီးမှုကို ခံစားကွရပါတယျ။ ဒါ့အတှကျ လူငယျတှေ သိထားသငျ့တာတဈခုကတော့ အခြို့သောသူတှဟော သူတို့ရဲ့ ဝါသနာကို စောစောစီးစီး သိနှငျ့ထားနိုငျကွ ပမေယျ့လညျး အခြို့ကတော့ သူတို့နဲ့ ဘယျနယျပယျက ပိုပွီးကိုကျညီမှု ရှိသလညျးဆိုတာ သိရှိနိုငျဖို့ အခြိနျတဈခုပေးပွီး ရှာဖှစေောငျ့ကွညျ့ကွရခွငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဖိအားတှကေို လဈြလြှူရှုကာ စိတျအေးအေးထားပွီး မိမိအတှကျ မှနျကနျကိုကျညီမယျ့ အသကျမှေးဝမျးကြောငျး ရရှိနိုငျဖို့ အခြိနျယူ စဉျးစားသငျ့ပါတယျ။
(၂) တတျသိနားလညျသူတှနေဲ့ ဆှေးနှေးတိုငျပငျပါ
နိုငျငံရပျခွားတှမှောတော့ အထကျတနျးကြောငျးတှနေဲ့ တက်ကသိုလျတှမှော အသကျမှေးဝမျးကြောငျး ရှေးခယျြဖို့အတှကျ တိုငျပငျဆှေးနှေးပေးတဲ့ ပညာရှငျတှေ ရှိပါတယျ။ လကျရှိမှာ အဆိုပါ ဝနျဆောငျမှုမြိုးတှေ မိမိတို့တိုငျးပွညျမှာ မရရှိနိုငျသေး တဲ့အတှကျ မိမိထကျအတှအေ့ကွုံရှိပွီး တတျသိနားလညျတဲ့ လူကွီးသူမတှေ၊ အဈကိုအဈမတှနေဲ့ ဆှေးနှေးတိုငျပငျပွီး အကွံဉာဏျ ရယူနိုငျပါတယျ။ ထိုသို့ ဆှေးနှေးလိုကျခွငျးအားဖွငျ့ သငျလိုခငျြနတေဲ့ အဖွအေတိအကြ မရရှိနိုငျသျောငွား လညျး သငျပွောပွတာတှကေို နားထောငျပွီး သူတို့ပွနျပွောပေးတဲ့ ရှေးခယျြမှုတှထေဲက သငျ့အတှကျ အထောကျအကူ ပွုစမေယျ့ အကွံကောငျးဉာဏျကောငျးတှေ ရရှိနိုငျပါလိမျ့မယျ။
သငျစိတျဝငျစားတဲ့ နယျပယျအစုံက အလုပျတှကေို လိုကျပွီး လလေ့ာကွညျ့ပါ။ ဥပမာ engineering ကို စိတျဝငျစားပါက ဆောကျလုပျရေးလုပျငနျးခှငျတှကေို သှားရောကျလလေ့ာခွငျးအားဖွငျ့ ထိုလမျးကွောငျးကိုသှားဖို့ သငျ့အတှကျ ဘာတှေ လိုအပျမယျ၊ ဘယျလိုအရညျအခငျြးတှေ သငျယူဖို့ လိုအပျမယျဆိုတာတှကေို သိရှိနိုငျလို့ သငျလိုခငျြနတေဲ့ အသကျမှေးမှု ဟုတျမဟုတျ ပျေါပျေါလှငျလှငျ သိရှိနိုငျပါလိမျ့မယျ။ ဒါမှမဟုတျ သငျ့ထကျကွီးတဲ့ လကျရှိတက်ကသိုလျပေါငျးစုံမှာ တကျရောကျနတေဲ့ အဈကိုတှေ၊ အဈမတှဆေီကနေ ထိုတက်ကသိုလျတှအေကွောငျးနဲ့ ဘယျလိုရှဆေ့ကျရမယျဆိုတဲ့ လမျးကွောငျးတှကေို မေးမွနျးနိုငျပါသေးတယျ။
(၄) ဝါသနာနဲ့ စိတျပါဝငျစားရာတှကေို စဉျးစားပါ
ကြှနျုပျတို့ရဲ့ ခှနျအားဟာ ကြှနျုပျတို့စိတျပါဝငျစားတဲ့ အရာတှနေဲ့ ဝါသနာတှမှော နဈမွုပျတညျရှိနတေယျဆိုတာ သိရှိထားပါ။ သငျဝါသနာပါပွီး ပွုလုပျရတာ ပြျောရှငျတဲ့ အရာတှကေိုလညျး အသကျမှေးဝမျးကြောငျးအဖွဈ ပွောငျးလဲနိုငျပါ တယျ။ သငျကြောငျးမှာ သငျယူခဲ့တဲ့ ဘာသာရပျတှထေဲက သငျစိတျဝငျစားပွီး ကြှမျးကငျြတယျလို့ ယူဆတဲ့ ဘာသာရပျ တှကေို ခရြေးပွီး ဘာလို့ကွိုကျရသလညျး၊ ဘယျလောကျထိ စိတျဝငျစားသလညျးဆိုတာ ခရြေးထားပါ။ သို့တညျးမဟုတျ လညျး သငျဝါသနာပါတဲ့ အခွားသော အရာတှေ (ဥပမာ – ပနျးခြီဆှဲတာ၊ ဓာတျပုံရိုကျတာ) စတာတှကေိုလညျး ခရြေးပွီး ဘယျလောကျထိ ဝါသနာပါသလညျးဆိုတာနဲ့ ဘယျလောကျထိ ထိုဝါသနာထဲမှာ နှဈမွုပျထားနိုငျသလညျးဆိုတာ ရေးထားပါ။ ထိုအရာတှထေဲမှာ သငျ့အနာဂတျအတှကျ အသကျမှေးဝမျးကြောငျး မပါနိုငျဘူးဆိုတာ ဘယျသူမှ အတပျမပွောနိုငျပါဘူး။
(၅) အနားကလူတှနေဲ့ အသိပေးတိုငျပငျပါ
အသကျမှေးဝမျးကြောငျး ရှေးခယျြခွငျးဟာ လမျးဆုံလမျးခှတဈခုမှာ ရပျနရေသလိုမြိုး စိတျဖိစီးမှု မြားလှနျးတဲ့အတှကျ သငျ့ရဲ့ စိုးရိမျပူပနျမှုတှကေို သငျ့အနီးအနားက မိသားစုနဲ့ သူငယျခငျြးတှကေို ပွောပွတိုငျပငျသငျ့ပါတယျ။ သူတို့တှရေဲ့ အကွံပေးစကားတှဟောလညျး သငျ့အတှကျ လမျးကွောငျးတှေ ပျေါပေါကျလာနိုငျပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ မိဘတှနေဲ့ တိုငျတိုငျပငျပငျ ပွုလုပျခွငျးအားဖွငျ့ အမှားနညျးမယျ့ ရှေးခယျြမှုတှေ ပွုလုပျနိုငျပါလိမျ့မယျ။
(၆) အခွားသူတှပေျေါ မူတညျပွီး ဆုံးဖွတျခကျြမခပြါနဲ့
မိဘတှေ သူငယျခငျြးတှစေတဲ့ အနီးအနားကလူတှကေို ပွောပွတိုငျပငျနိုငျပမေယျ့ အခွားသူတဈယောကျက သငျ့အတှကျ “ဒါ ဖွဈသငျ့တယျ။ ဒါ လုပျရမယျ”ဆိုတဲ့ အကွံပေးစကားတှေ၊ အမိနျ့တှပေျေါ မူတညျပွီး သငျ့အနာဂတျကို မဆုံးဖွတျ လိုကျပါနဲ့။ သငျလြှောကျလှမျးရမယျ့ ဘဝလမျးဟာ သငျ့ကိုယျပိုငျသာဖွဈပွီး အခွားတဈယောကျက ဝငျရောကျဆုံးဖွတျ ရှေးခယျြပေးလို့ မရပါဘူး။ ထိုသို့ ရှေးခယျြပေးတာကို ပွုလုပျရုံနဲ့ ဘဝဟာ အဆငျပွသှေားမှာ မဟုတျပါဘူး။ မိမိ လြှောကျလှမျးရမယျ့လမျးကို မိမိဘာသာ ရှေးခယျြပါ။ သို့မှသာ သငျ့ဘဝဟာ သငျ့အတှကျ အဓိပ်ပာယျရှိပွီး နပြေျောစရာ ကောငျးမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သူငယျခငျြးက တကျရုံနဲ့ ထိုတက်ကသိုလျကို လိုကျမတကျပါနဲ့။ မိဘက ရှေးခယျြပေးရုံနဲ့ ထိုအရာကို မဆုံးဖွတျပါနဲ့။ အဓိက အခကျြကတော့ တိုငျပငျပါ။ ဆှေးနှေးပါ။ ကိုယျတိုငျ ဆုံးဖွတျခကျြခပြါ။ မှနျကနျတဲ့ အသကျမှေးဝမျးကြောငျးနဲ့ လှပတဲ့ ဘဝလမျးခရီးကို လြှောကျလှမျးနိုငျပါစလေို့ ဆုမှနျခွှလေိုကျရပါတယျ။